Umculo we-Sankt Martin Sheet nombhalo ovela kumculo wezingane zokunyathelisa
Ingoma yaseMartin - amanothi nombhalo
Ingoma yaseMartin - umbhalo
Umkhosi weSt. Martin of Tours uzoba ku-11. Kwagubha ngoNovemba futhi kwahlukahluka ezindaweni eziningi. Noma kunjalo, indaba kaSt. Martin kanye nesenzo esidumile - ukwabelana ngejazi - yonke indawo ikhona.
Umsakazo nombhalo uSankt Martin Lied
Ezinganeni, ukunyakaza kweSt. Martin kuyimbangela yokugubha ngezizathu ezihlukahlukene. Ukufuduka okunjalo kwenzeka emazweni amaningi aseYurophu, nakuba imininingwane encane ingahlukahluka kwesifundazwe. Konke kufana nokho, noma kunjalo, ukulandelana ngezibani noma izibani ezihlala endaweni yokuhlala. Izibani zithengwa noma zikhonjiswe nge-enkulisa nasezingane zesikole ngokwabo.
Kule nkambiso, abantu baphinde bahambisane noMt. Martin owakhiwe. Abahlanganyeli bahlabelela i-Martinslieder futhi bahambisana namaqembu.
Umsakazo nombhalo uSankt Martin
behamba ngeqhwa nomoya,
ihhashi lakhe lamyisa ngokushesha.
UMartin oNgcwele wahamba ngesibindi esilula
ijazi lakhe limboza futhi lifudumele. Uhlala eqhweni, ehlezi eqhweni,
kwakukhona umuntu ompofu eqhweni,
bebengenayo izingubo, bebenama-rags.
O ngisize ekuhluphekeni kwami,
uma kungenjalo iqhwa elibabayo liwukufa kwami.
UMartin oNgcwele wadonsa izinsolo,
ihhashi lakhe limi nomuntu ompofu,
UMartin oNgcwele ngezimpahla zekrele
ijazi elifudumele lingaphazamiseki.
UMartin oNgcwele wanikeza isigamu,
lo mkhumbi ufuna ukubonga ngokushesha.
Kodwa uMartin Saint uhamba ngokushesha
kude nengubo yakhe ingxenye.
U-Saint Martin uzibeka ekuphumuleni
Kulophupho iNkosi ingena.
Uyembathisa ingubo njengengubo
UMartin oNgcwele uyambheka ngokumangala
iNkosi imkhombisa izindlela.
Wamethulela esontweni lakhe,
futhi uMartin ufuna ukuba umfundi wakhe.
USart Martin waba umpristi
futhi bakhonza ngokuzithandela e-altare,
okungenzeka kumhlobisa ethuneni,
Ekugcineni wathatha i-crosier.
UMartin oNgcwele, wena muntu kaNkulunkulu,
manje uzwe ukuncenga kwethu
Sithandazela ngalesi sikhathi
futhi usihole ebusisweni.
Vula umculo weshidi wezingoma ze-Sankt Martin njengesifayili lesithombe
USankt Martin Fest - Amasiko kodwa namanje
Ikhasi lokubala lombala Saint Martin
Ikhasi lokubala umbala we-Saint Martin Lanterns Ukuhamba
Ikhasi lokubala umbala Saint Martin / Martinstag
Ikhasi lemibala uSt Martin